Tian’ny Governemanta Hofehezina ny Fankahalana Ao Amin’ny Media Sosialy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Ruth Grant
Voadika ny 31 Aogositra 2017 4:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, English, Français, Ελληνικά, Italiano, Português, Español
Tamin'ny Jolay 2017, raisin'ny Antenimiera Nasionaly Fanorenana ho andraikiny ny fahefana fanaovan-dalàna rehetra izay teo ambany fahefan'ny Antenimieram-Pirenena Fanaovan-Dalàna, izay nananan'ny mpanohitra ny maro an'isa teo aloha, ka manafoana ho azy ny parlemanta sady manaisotra tanteraka ny governemanta venezoelana amin'io andrim-panjakana nofidim[-bahoaka] io. Efa nambaran'ny governemanta mialoha fa naniratsira ny Antenimiera Mpanao Lalàna, ka efa raisiny ho tsy manankery avokoa izay hetsika na zavatra rehetra mety ho ataony.
Ny ANC dia natsangana tao anatin'ny onjam-panoherana izay nandravarava ny firenena tao anatin'ny volana maromaro, sy ny fisalasalana amin'ny maha-ara-dalàna ny ataony, ankoatra ny fidradradradrana fisian'ny hoso-pifidianana — izay ilay orinasa nanolotra ny teknolojia hanatanterahana ny fifidianana ihany no nanao izany — ary ny tsy faneken'ny iraisampirenena ny maha-ara-dalàna azy.
Tsy zava-baovao, anefa, ny fanaratsian'ny fitondrana chavista ny media sosialy: tamin'ny taona 2010 dia efa nampangain'ny governemanta ho mandrisika fankahalana sy herisetra ny tambajotra antserasera, ary ahiana ho voasambotra ireo mavitrika amin'ny fampiasana azy ireny. Tamin'ny taona 2014, efa nisy ny volavolan-dalàna napetraky ny antoko nitondra tamin'izany fotoana izany te-hametraka nyy fanohernaa an-tserasera ho “fampihorohoroana antserasera.”
Nanambara Atoa Delcy Rodríguez, izay filohan'ny ANC fa: